Randrianantenaina Jean Philbert (mpanazatra) “Lanin’i Barea tsara i Tonizia”
Dingana farany hiakarana amin’ny CHAN Vonon-kandresy an’i Namibie ny Barea
Taorian’ny lalao fanazaran-tena nifanandrinan’ny Barea Chan tamin’ny ekipan’ny Elgeco Plus teny amin’ny kianjan’izy ireo teny Ambohijanaka ka nivoahany ho mpandresy 3 – 1
Basikety Fifaninanana nasionaly vétéran sy U 14 Nahazoam-bokatra ny andro faha-5 omaly alarobia
Mitohy ny fifaninanana basikety nasionaly sokajy veteran sy U 14 any Mahajanga any ka efa nahazoam-bokatra sahady ankehitriny ny andro faha-5 notontosaina omaly.
Fifaninanana ASIEF nasionaly any Antsiranana Nahazo tsodrano tamin’ny praiminisitra Ntsay Christian
Nahazo tsodrano tamin’ny anaran’ny governemanta tarihany sy tamin’ny anaran’ny tenany manokana ny tompon’andraikitra mitantana sy mikarakara ny ASIEF na “Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires” notarihan’ny filohany, Botosera John Love,
Champion’s League any Eoropa Ireo mendriky ny andro faharoa
Tontosa tamin’ny talata 01 sy alarobia 02 oktobra lasa teo ny andro faha-2 amin’ny fifaninanam-bondron’ny Champion’s League any Eoropa.
Fifanintsanana CAN 2021 Ireo lalao 6 hatrehan’ny BAREA mandritra ny 1 taona
Mandritra ny 1 taona maninjitra no hanatanterahana an’ireo lalao 6
Baolina kitra - FMF Manomboka misy olana indray ny serasera
Efa nisokatra tamin’ny ankamaroan’ny mpanao gazety malagasy ny seraseran’ny baolina kitra tamin’ny fotoana nitondran’ny « Comité de normalisation FMF » notarihan-dRtoa Atallah Beatrice.
Club karate WAKAMA Mahajanga Nahazo fiofanana Wado-Ryu
Nahazo fiofanana karate Style Wado-Ryo ny mpikatroka miisa 50 avy amin’ny kliobana karate WAKAMA any Mahajanga.
Azo atao tsara ny mandresy ny Tonizia…! Firy ireo ekipa goavana ary natahorana nihaona tamin’ny Barean’i Madagasikara nandritry ny lalaon’ny CAN 2019 ity, saingy,
lavon’izy ireo avokoa izany, hoy Randrianantenaina Jean Philbert mpanazatra ny klioba KFA.A Andranomahery avaratra. Hiditra amin’ny ampahefa-dalana ny ekipa roa tonta anio ary azo resena tsara izy ireo.
Lanin’ny Barea tsara raha i Tonizia, satria mitovitovy ny lalaon’ny roa tonta ary manatombo amin’ny halavany izy ireo. Ny atahorana amin’ny ekipantsika fotsiny ny fanafihana ataon’i Tonizia fa mila mailo sy mailaka kosa ny mpanafika sy ny irakiraka afovoany ary milà miverina haingana, hoy ny heviny.Mahay mamono baolina ny Barea, fa mila hamafisina io. Tokony hiaro tena 20 minitra amin’ny fizaram-potoana voalohany isika ary aorian’izay, manao ny “pression” sy fanafihana sesilany. Ny amin’ny fiarovan-tena kosa dia mila mifanampy ary hamafisina ny “defense”. Tsy tokony hiova ny firafitry ny ekipa eny ambonin’ny kianja, izay efa napetraky ny mpanazatra tamin’ny voalohany ihany. Resintsika 2-1 ny Tonizia, ho an’ity mpanazatra ny klioba ity. Ho an’atoa Ramiandrisoa Lalaina, talen’ny sekoly kosa dia resin’ny Tonizia 2 no 1 ny Barea, noho io ekipa io manana teknika sy herijika amin’ny famonoam-baolina. Ho an’i George sy Rasolo mpitia baolina, dia 2 Barea ary 0 Tonizia. Ralaude 3 Barea ary 1 Tonizia. Daddy 3 Barea ary 2 Tonizia.